Uku ndiko kushanda kwekutanga kushambira neApple Watch | IPhone nhau
Uku ndiko kushandira kwekutanga kushambira neApple Watch asi haugone kurodha pasi
Iyo Apple Watch inodzivirira mvura kunyangwe iine nuances. Munguva yekuratidzwa kwayo, kambani yeapuro yakasimbisa kuti isu hatizokwanisa kunyudza wachi, kunyange tichitenda chitupa chayo cheIPX7, inogona kumira kupwanya pasina matambudziko.
Avo vakatokwanisa kuiyedza, vakasimbisa kuti kunyangwe zvichiratidzwa neApple, iyo smartwatch inogona kunyudzwa isina kudzika uye kwenguva yakati rebei, chokwadika, pamberi pokupinda kwemvura mukati memba yayo, iyo waranti ichave yakadzimwa yega yekutadza kutevedzera kurudziro yemugadziri.
Vamwe vanogadzira vafunga kupfuudza zvinokurudzirwa naApple zvemubhedha weswimsuit uye nekuda kwechikonzero ichocho, ivo vagadzira iyo yekutanga app yakagadzirirwa iyo Apple Watch uye kushambira. Iyi Anwendung inokutendera kuti utarise zvekutanga parameter yemitambo musangano kutora mukana wewachi Hardware uye nekuvandudza kwakaitwa muHealthKit.
Zvisinei, ichi chishandiso cheApple Watch hachizoone mwenje kusvikira iwe warega kutyora mutemo 13.1 wemitemo yekutsikisa paApp Store. Mutemo uyu unotsanangudza kuti hapana mugadziri anogona kurodha mafomu anokurudzira vashandisi kushandisa chishandiso cheApple zvisirizvo uye zvinogona kukuvadza chigadzirwa chaicho.
Mune ino kesi, Apple Watch haigone kunyudzwa mumvura saka ndinotya kwazvo kuti iyo App Store yekuongorora timu haizozvigamuchire kudzamara tave nemusiyano wewachi inogadzirisa uku kukanganisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Uku ndiko kushandira kwekutanga kushambira neApple Watch asi haugone kurodha pasi
Isa nds4iOS emulator isina Jailbreak
Rondedzero yeiyo iPhone 6s inosvinwa nehurefu hwakati kurei